KO MIN KO NAING talk about peace in Rakhine State (21-02-2013 Denmark)
Racist General is alsoacoloure person even in the eyes of yellow people
ဗမာလူမျိုးတွေ ရခိုင်တွေ ရဲ့ ကျွန်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခရစ်ယျာန် ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းများ၏ အရေအတွက်စာရင်း၊
ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသော ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ ကိုယ်စား ရွှေတိမ်ဓမ္မသိင်္ဂီကျာင်းတိုက် ဆရာတော်ဦးစန္ဒိမာမှ မုဒိတာ မေတ္တာစကားများ ပြောကြား
၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး တို့အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း-Racist ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း
Posted: 26 Feb 2013 08:51 AM PST
Thanks to Mr. SKT who shared this joke.
Posted: 22 Feb 2013 01:17 AM PST
Posted: 26 Feb 2013 06:43 AM PST
I believe the standoff in Lahad Datu will be prolonged. We will have to consider if Manila asks for more time to persuade its about 150 citizens to leave Sabah and go back to their homeland.
Of course, we will not (however, not my decision) resort to any military action in order to flush them out. Our good relations with Manila will see that any kind of arm confrontation is avoided although the Muslim fighters in some islands across Sabah are ready should situation gets out of control.
Well, its up to the wisdom of diplomats from both sides. However, Manila, for the time being should also control its media mercenary by not publishing any more articles on 'claim on Sabah' as this was part of the motivational catalyst that prompted the Sabah invasion.
Sabah is Philippines!
The Malaysian government is again posed to repatriate several thousand "illegal immigrants" from Sabah to the Philippines this year. The words "repatriate and illegal immigrants" to me are not fitting given that we have not abandoned our claim to that land north of Borneo.
I continue to believe that the Philippines havealegitimate claim to Sabah. The fact that Malaysia is paying more than 7000 ringgits annually to the heirs of the Sultan of Sulu until now, clearly showed that they recognize who the rightful owners of Sabah are! How could they lay claim toaterritory when they are paying rent to Filipino citizens? You don't have to bealawyer to figure out that this part of Borneo is legally our turf.
It is very clear that Sabah is very much part of our country and its history. It was onceapart of the mighty Sultanate of Sulu. Sabah was reportedly given asa"gift" by the ruler of Brunei to the Sultan of Sulu after the latter helped suppress the rebellion in his kingdom. The lease agreementbetween Sri Paduka Maulana A Sultan Mohammad Jamalul Alam and the British North Borneo Company in 1878, for the latter to use Sabah in exchange forayearly rent and some weapons, showed that indeed, the territory is owned by the Sultanate of Sulu.
The Philippine's claim over the land started on September 11, 1962 when then President Diosdado Macapagal accepted the declaration of the Sultan of Sulu to surrender Sabah to the Republic. By this declaration, the responsibility to regain control of the territory from the lessee has been effectively transferred to the government of the Philippines. The declaration was made during the time that Malaysia is not yetasovereign nation, being under the British control.
Malaysia claimed that the9heirs of the sultan of Sulu had relinquished their claim over the territory. In 1939, the heirs of the Sultan filedacivil suit against the British company, the lessee, who continue to refuse to turn-over the land to them. During the same year, the court of North Sabah ruled in favor of the heirs. If they claim that the9heirs had relinquished their claim to Malaysia, they have been dead long time ago before Malaysia tasted the air of independence. Then, who are these9heirs that Malaysia is referring to?
The original9who filedacivil suit against the British company were Dayang Dayang Hadji Piandao and eight others including Putlih known in our history books as Princess Tarhata.
Therefore, if the heirs had rescinded their claim, it must be the living heirs, probably Sultan Ismael Kiram II which is preposterous even if by all possibility he did it. The 1962 declaration by the Sultan of Sulu in Malacanang that officially turned over the claim to the Philippine Republic sealed the territorial entitlement over Sabah. Therefore, the current heirs cannot just make any decision to withdraw the claim. Therefore, Malaysia's assertion over Sabah is pathetic. Their loyalty to their British masters have been well rewarded that even the leased land of their master's decided to turn over everything under their colony including the rented land of Sabah.
Malaysia's decision to let every Filipinos out of Sabah is certainly part of their agenda to completely get rid of any possible obstacle to their complete seizure of the territory. This will strengthen their claim to the international court that the people living in that territory are Malaysian citizens.
The Philippine government should makeamove. We are thankful for Malaysia's assistance in he peace process in Mindanao and of course their investments, but that is out of the point. Our indecisiveness on this issue would bring the same consequences to our other claimed territories. Take note, we still haveaclaim on Spratleys where Malaysia is one of the five claimants.
For comments, email to roldanalex@yahoo.com
This is among the thorns that hurt KL-Manila relations. Yes, there are some truth in it but some of it cannot legitimise such claims. We need to tackle most of the technical parts and loose documentations before taking it to the arbitrators.
The standoff in Lahad Datu is already in its third week and the 'final' dateline given for them to leave is by midnight (today), and the invaders had vowed to stay put.
What is our next course of action? Are we going to just sit on in forayear oradecade?
Another part of me wanted to say "Never mind the idiots", but I suspect she believes that it is the idiots who get the most press coverage, and evidence of their idiocy is prevalent 24/7.
But why should I try to stop her, if at the end of the day she believes that leaving the country is what's needed to be better? I myself advocate going abroad to study or for work experience as it developsamore rounded view of the world with all its eccentricities and foibles.
It may be that she wants to raiseafamily, and she feels that Malaysia is not the best place to do that. This might have been the conclusion she came to if she had consulted the recent report by the Economist Intelligence Unit (the sister company of The Economist magazine) titled "Where to be born in 2013", and found that Malaysia wasn't even in the top 35 countries to grow up in for the next few decades (tinyurl.com/b6webej). The study takes into consideration overall quality of life, including how happy people are, how economically well off they will be, the prevalent level of crime, trust in public institutions and overall quality of healthcare.
Of the 80 countries examined, Malaysia lies at 36th, above China (49th), Thailand (50th), Vietnam (68th) and Indonesia (71st), but below Australia (2nd), Singapore (6th), Hong Kong (10th) and Britain (27th). Switzerland was top, while Nigeria ranked lowest among the countries listed.
From this, I think it would be easy to assume, "Well, let's move to Australia or Singapore, where my children will getabetter chance to grow up successful". And yet, reality is rarely as simple as the economic models that try to quantify it.
There are so many factors in play, including your existing economic status and society networks. Obviously, if you move to Britain but can't getagood job there, then it's not likely that anything else you do there will be successful.
Other circumstances may matter. While many Malaysians consider leaving for the sake of their child's education, it was recently reported thatanumber of Japanese families are relocating to Malaysia in order for their children to get an education here (tinyurl.com/axq95n2).
The contradiction may be explained by comparing salaries and ambitions: Malaysians may feel good public education is out of reach at home, while the incoming Japanese migrants have money and mature, rewarding careers. What may not be right for you now, may be exactly what you're looking for 10 years down the road.
What needs to be realised is that in an era of globalisation, people will always have the option to move to greener pastures. The problem exists not just between countries, but between cities in the same nation.
For example, many of the best and brightest of people born in Kuching or Alor Setar will end up living and working in KL or Penang.
Asaresult, the quality of talent in the towns they leave behind drops, while the large cities continue to grow.
However, after some time, people may reachapoint in life where they feel they want to go back to their hometowns and build something there, near loved ones whom they grew up with.
Thus, migration isaflow that can come full circle, guided by ever-changing needs and opportunities.
In all this, if Malaysia wants to be relevant as an attractor for talent, it must develop in the right ways. It cannot be that it is all bad; after all, Malaysia came 36th in the list, not 70th, so there must be things that we are already doing right.
The study suggests that the countries that are successful have robust economic development in an environment that is peaceful and liberal. It is also better to beasmall country, presumably because they can better address the problems of disparity between the haves and have-nots.
Putting aside the idea that the Klang Valley could segregate asaseparate city-state, I'd say these conditions suggest that some of our national policies seem to be along the right lines – specifically, portions of the Economic Transformation Plan and the Government Transformation Plan – while identifyingafew which may eventually be limiting.
And naturally, it is those few that invite the most political rhetoric, which then means that they take up the most column inches and public attention, which in turn encourages some friends of mine to think that Malaysia is going backwards and that they should leave.
Yes, the best laid plans don't always succeed, and we are right to be cautious of rosy pictures painted by politicians. All I can say is that you can still best identify opportunities in the country you grew up in and have put down roots as long as you keep your eyes open for them.
But your eyes must be open. There are Malaysians abroad who seem embarrassed of their heritage – mainly because they believe the reason they left was because things back home were "so bad" and that progress meant to press on the accelerator and speed away. But if you blinker yourself and only look straight ahead, you may miss opportunities that your upbringing and heritage have best prepared you for.
U Aung Tin wrote:
ကိုမင်းကိုနိုင်က ရိုဟင်ဂျာမေးခွန်းကို ဘယ်လိုအဖြေပေးခဲ့သလဲ။ လူကြိုက်များအောင် လုပ်နေတဲ့ အပေါစား တာဝန်မဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေလို ဖြေခဲ့သလား။
စဉ်းစားညာဏ်နှင့် အမျှော်အမြင်ကြီးမားတဲ့ တာဝန်ရှိ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလို ဖြေခဲ့သလား။
နားဆင်ပါ။ တိုင်းပြည့်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်။
Posted: 26 Feb 2013 02:59 AM PST
Posted: 26 Feb 2013 06:39 AM PST
ဘာသာခြားတို့၏ စီးပွားရေးကို ဆန့်ကျင်မှ အမျိုးချစ်တာလား ဦးဇင်း ၀ီရသူ?
Source: FB Comments of Ko Ko Naing ၀ိရသူ အဲလို လုပ်လေ ကောင်းလေဘဲ မွတ်စလင်မ်တွေ မနာ ကြပါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်က ခေတ်ကို နောက်ပြန်ဆွဲနေတာ ခေတ်ရှေ့ပြေးရမှယကို ကြောက်လို့ တဲ့ သူက ဘာလူမျိုး ဘာသွေးရောလဲ သိလား သူက ရခိုင်သွေးရောတယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ် တစ်ချို့ဆို သူက ရခိုင်လို့တောင်ပြောကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာ က ဗမာလူမျိုးတွေ ဟာ စကားပြောတာ ချိုသာတယ် ၊ မရိုင်းကြဘူး အရင် က ဗမာတွေ လက်အောက်မှာ ရခိုင်တွေ ကျွန်ခံရတယ်
အခုနောက်ပိုင်း ရခိုင်တွေ ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ဗမာလူမျိုးတွေ ရခိုင်တွေ ရဲ့ ကျွန်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ၊
ရခိုင်နဲ့ ဗမာ ဘာကွာလဲ၊ ဘာသာလည်းမကွာဘူး ၊ ရုပ်ရည်လည်း မကွားဘူ၊ အကျင့်တော့ကွာတယ်။ ဒါတွေကို ရခိုင်တွေ က လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ က အကွက် ကျကျ စီစဉ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါက ရခိုင်တွေ က ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းလုပ်ခဲ့ တာကို မမေ့ ဘဲ အခုလို လုပ်ဆောင်နေခဲ့ လာတာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပါပြီ၊ ဒေသတစ်ခုရဲ့ ပတ်ဝတ်ကျင် အခြေအနေကို မသိဘဲ ယောင်ပြီးအော်နေတာ အခု ဗမာတွေဘဲပေါ့။
ကျွန်တော် ပြောချင်တယ် ရခိုင်တွေ ဟာ ရုပ်ရည်တူတော့ ဗမာ ဟန်ဆောင်ပြီး တပ်မတော် အရာ ရှိ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အစိုးရပိုင်းမှာ အဓိက ကျတဲ့ နေရာ တွေ ယူလိုက်သေးတယ် ၊ စစ်အစိုးရ လက်ထက် က စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ ခင်ညွှန့်နဲ့ ပေါင်းပြီးအမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်၊ အခု ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလာတော့လည်း ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေမှာ ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့လို့ အခု နိုင်ငံရေးကို ဘာသာရေးကို အသုံးချပြီးလုပ်ဆောင်လာသလို ရခိုင်သွေးပါတဲ့ ဘုန်းကြီး အချို့ က အခု ဒီလို ဟာတွေ လုပ်ဆောင်လာကြတယ်။
ဒါဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်မှုကို ပိတ်စို့နေတာနဲ့ တူတူပါဘဲ၊ ရခိုင်(ဗမာအတု) ဘုန်းကြီးတွေ လုပ်ဆောင်နေတာကို ဘာဖြစ်လို့ ဗမာလူမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်နေတာလဲ၊ဘာဖြစ်လို့ မစဉ်းစားကြတာလဲ ၊ ဒါတွေ ကို အမှား အမှန်ကို သိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်တွေ ဗမာတွေ ကို အရမ်းမုန်းတယ်။ ဗမာစကားပြောရင်တောင် အကြည့်စိုးနဲ့ ကြည့်တယ် အောက်ချီးတဲ့ အောက်ချီးစကားပြောတယ်တဲ့ ။
စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းက ရောက်တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ ဗမာလိုပြောရင် ရခိုင်ကျောင်းသား/သူတွေက ရခိုင်လိုဘဲ ပြောတယ်။ စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကို မေးကြည့်ရင်ဖြင့် သိမှာပါ။ စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှာ မွတ်စလင်မ် နဲ့ ချင်းလူမျိုးတွေဘဲုမန်မာပြည်အထက်ပိုင်းက ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ဗမာလိုပြောကြတာပါ။ အဲလို ရခိုင်တွေ က ဒီနေ့ သူတို့ အကျိုးအတွက် ဗမာတွေ ကို ဘာသာတရားဗန်းပြပြီး သူတို့ နဲ့ အတူတူပါလာအောင်လုပ်ဆောင်နေတာမှာ ဗမာတွေ ကလည်း သူတို့ ပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်ဆောင်လာပြီး ရခိုင်တွေရဲ့ ကျွန်ုဖြစ်နေတာကို နှမြောဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။မြန်မာပြည်ဟာ ဗမာလူမျိုးအများစုနေတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ဗမာလူမျိုးတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံတိုးတက်မှုကို လိုလားမယ်ဆိုရင်တော့ အခု ပြောဆိုနေတာတွေ ကို စမ်စစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်မွတ်စလင်မ်က မြန်မာပြည်ကို မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံလုပ်ချင်လို့လဲ အဲဒါဘယ်သူပြောတာလဲ ဘယ်သူလုပ်နေတာလဲ အကောင်အထည်အဖော်ပါလား။ မြန်မာပြည်က ထောက်လှမ်းရေး စီအိုင်ဒီ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့ တွေ က ကကော ဒါကို တကယ် မသိတာလား။ တကယ်တမ်း မွတ်စလင်မ် အဲလိုလုပ်ရင် အခုလောက်ဆို အဲဒီမွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အရိုးတောင်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ရှိရက်နဲ့ ဒါကို မစုံစမ်းနိုင်ဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်မ်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာသာတရားကို လေ့လာဖို့ဘဲ ပြောနေတာကို စပီကာတွေ နဲ့ ပြောနေတာကို ထောက်လှမ်းရေးတွေ သိနေတာဘဲ မလား။ ဒါကို ဗလီတွေ မှာ ဟိုဟာလုပ်တယ် ဒီဟာလုပ်တယ်လို့ ပြောသေးတဲ့ လူက ရှိသေးတယ် ။ ရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကတောင် တခြမ်းပဲ့ ဗလီကို ဦးတည်ပြီး အစီရင်ခံစာမှာရေးထားတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးဘယ်နှစ်ယောက်ကို မေးတယ် ဘယ်နှစ်ယောက်က ဘယ်လိုပြောတယ် အဲဒီမှာ ၈၀ ရာခိုင်းနှုန်းသော ရခိုင်တွေ က တစ်ခြမ်းပဲ့ဗလီကို ထိုးပြတယ်။ ဒါတွေ ဟာ အလကား မဟုတ်တာတွေကို လျောက်ပြောနေတာကို အစိုးရကသိသိကြီးနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်နေတာလဲ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အထိ မြန်မာပြည် အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေး မနိုင်မှာကိုကြောက်နေလို့ ဒီလိုလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကို ပြည်သူတွေ သိသင့်ပါတယ်။
အိုး အမျိုးစောင့်ရခိုင်တွေ ဒီနေရာ မှာ ဗမာပုံစံနဲ့ Face Book ပေါ်ကနေ ရေးနေတဲ့ အမျိုးစောင့် ရခိုင်တွေ သိအောင်ပြောနေတာ၊ မင်းတို့ တက်နေတဲ့ စစ်တွေ တက္ကသိုလ်ကို ဘယ်သူပေးလဲ ဆိုတာ မင်းတို့ သိတယ်မလား၊ အဲဒီတက္ကသိုလ် ဆောက်ဖို့ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ မင်းတို့ပြောနေတဲ့ ကုလားဆိုတဲ့ ဟာ ဒေါက်တာ မဟာသီ နဲ့ ဟာဂျီမ ဒေါ်ပုတို့ပေးတယ်ဆိုတာ မင်းတို့ သိတယ် မလား၊ ဘာဖြစ်လို့ မသိရမှာကွာ သိပါတယ် အဲဒီ စစ်တွေ တက္ကသိုက်က မီးချောင်းတွေ မီးကလုပ်တွေ ပန်ကာတွေ -၀ါယာတွေ အကုန်လုံးမှာ Made in Malaysia ဆိုပြီး အပြာရောင် ပန်းပွင့်လေးပေါ်မှာ ရေးထားတာကို ငါခုထိမြင်တုန်းဘဲ ၊ မင်းတို စောက်ရခိုင်တွေ တက္ကသိုလ်ဘေးက မင်းဂံရွာ က အရက်ဆိုင်က နေ အရက်ထုတ်ကို အိတ်တွေနဲ့ ယူလာပြီး ချိတ်ထားတာကို ငါမြင်တုန်း မင်းတို့တွေ အခန်းထဲမှာ ဆေးခြောက်ရှူတာကို ငါမြင်တုန်း မင်းတို့ တွေ ကြောင့် အခန်းတစ်ခန်းစီမှာ ပန်ကာ အလုံးနှစ်ဆယ်လောက် တတ်ထားတဲ့ ပန်ကာတွေ မလေးရှားက ပန်ကာတွေ မင်းတို့ အရက်သောက်လာပြီး တွဲလို့ ပျက်စီးသွားတာ ငါမျက်စိမှာ မြင်သေးတယ်။ အိမ်သာကို ဒီလောက်လှအောင် မလေးရှား က ကြွေပြာတွေ မှန်တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဟာကို ပျက်စီးလိုက်တာ ငါသိတယ်လေ။ ၀ါယာကြိုးတွေ ကို အလကားနေရင်းဖြတ်လိုက်တာကို ငါသိတာဘဲ ဟာ ။ ကုလားကို မုန်းရင် အဲဒီဟာတွေ ပြန်ပေးလိုက်ပါ။
သိန်း စိန် >>>၀ီရသူလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိမှာပေါ့ ၊ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုအရင်ကမြိုင်ကြီးငူဘုန်းကြီးက မွတ်စ်လင်မ်ဆိုလုံးဝကြည့်လို့မရဘူး …. သေချာလေ့လာကြည့်တော့ သူငယ်စဉ်က မွတ်စ်လင်မ်အိမ်မှာ ကျွန်လုပ်ခဲ့ရလို့ဆိုတဲ့ အဖြေပေါ်လာတယ်၊အခုည်း ဦးက၀ိဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးက ဦးဆောင်ပြီး မွတ်စ်လမ်င်ဆန့်ကျင်ရေးတွေလုပ်နေတယ် —– သူလည်းပဲ သူ့အမျိုးထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက် မွတ်စ်နဲ့လိုက်ပြေးသွားလို့ဆိုတဲ့အဖြေပေါ်လာတယ်၊ သနားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ သူတို့အနောက်က သံယောင်လိုက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါပဲ
Check out this jaw-dropping article.
I am halfway reading the article and watching the video.
CLICK HERE to read how 3D printing will change our world.
And no, I am not investing in it. Not retirees like me. But I am sharing this article because I am sure many of us want to keep abreast with the latest developments.
Posted: 26 Feb 2013 05:07 AM PST
Rakyat mahu menilai pemimpin-pemimpin mereka atas hujah dasar, namun jelas Perdana Menteri sendiri hanya berupaya bermain politik perkauman dan agama. Semalam, Dato' Sri Najib telah membuat tuduhan liar bahawa DAP menindas agama Islam.
Adalah jelas di sini bahawa fakta-fakta dapat menyanggah tuduhan-tuduhan Najib yang langsung tidak berasas. Maklumlah, BN tidak mampu menghadapi kita di atas landasan politik baru dasar dan debat, kerana mereka tidak dapat berhujah melainkan dengan sentimen sempit perkauman dan agama. Oleh itu, mereka sering mengelak jemputan untuk berdebat apabila dicabar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tuan Guru Dato' Seri Hadi Awang.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Dato' Sri Najib telah menandatangani Ikrar Integriti Transparency International. Akan tetapi, apa gunanya beliau menandatangani ikrar tersebut sekiranya beliau tidak sanggup mengarahkan seluruh Jemaah menteri dan timbalan-timbalan menteri, serta ketua menteri Sabah dan juga Sarawak untuk membuat pengisytiharan harta secara terbuka? Jika Najib enggan membuat demikian, Ikrar Integriti beliau adalah sandiwara semata-mata.
Sepertimana yang diungkapkan Mahatma Gandhi, "There is enough in this world for everyone's need, but there is not enough in this world for one man's greed."
Gejala rasuah sudah berleluasa di negara kita, sehingga negara kita sudah menjadi sinonim dengan ketirisan, kos terlanjur dan skandal-skandal kewangan seperti skandal RM3 bilion Maika, skandal saham Bumi yang berjumlah RM52 bilion, Zon Bebas Pelabuhan Klang yang membabitkan RM12 bilion dan banyak lagi termasuk skandal RM250 juta "lembu dan kondo" NFC.
Pada masa yang sama, laporan oleh badan pemerhati kewangan antarabangsa yang berpusat di Washington, Global Financial Integrity, telah mendedahkan bahawa pengaliran keluar dana haram, ataupun "capital flight" yang berlaku di Malaysia telah berjumlah RM197 bilion pada tahun 2010 dan RM871 bilion sepanjang 10 tahun dari 2001 hingga 2010.
Berdasarkan kenyataan Menteri BN sendiri, iaitu Dato' Seri Chor Chee Heung, rasuah di negara kita mengakibatkan ketirisan sebanyak RM26 bilion setahun. Cuba bayangkan apa yang boleh dilakukan dengan wang sebanyak ini. Kita akan menggunakan wang yang disimpan ini untuk membasmi kemiskinan di seluruh negara, terutama sekali di Sabah dan Sarawak, dua negeri yang terkaya dari segi sumber asli tetapi yang mempunyai kadar kemiskinan tertinggi di Malaysia.
Di bawah Pakatan Rakyat, kita percaya bahawa "Hak rakyat hak keramat, hak kroni hak keparat!"Pakatan Harapan Rakyat
Sementara Barisan Nasional terus melakukan "flip-flop" dan bercakap dengan lidah bercabang, Pakatan Rakyat telah konsisten dalam dasar-dasar kita. Pada bulan Disember 2009, kita telah melancarkan Dasar Bersama. Pada bulan Disember 2010, kita telah menerbitkan Buku Jingga. Pada bulan Januari 2012 pula, kita telah memperkenalkan Tawaran Jingga. Hari ini, kita berkumpul untuk menyaksikan dokumen dasar terbaru, iaitu "Manifesto Rakyat: Pakatan Harapan Rakyat".
Akhir sekali, ahli falsafah Plato pernah menyatakan bahawa "Kita boleh memaafkan seorang kanak-kanak yang takut dengan gelap; tragedi sebenar berlaku apabila orang dewasa takut dengan pencerahan."
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း (၁၄)ခုရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခရစ်ယျာန် ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်း၊ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းများ၏ အရေအတွက်စာရင်း၊
Source: ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သာသနာရောင်ဝါထွန်းစေဖို့ စာအုပ်မှ
Posted: 25 Feb 2013 11:05 PM PST
မြန်မာပြည်ကို ရည်စူး၍ "၀" သူပုန်များအား တရုတ် လျှို့ဝှက်စွာ ထောက်ပံ့
ရှမ်းပြည်နယ်မှ အရှေ့တောင်အာရှတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုများနဲ့ ပတ်သတ်မှုအများဆုံး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ "၀" လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်
မြန်မာမြောက်ပိုင်းက တရုတ်ဘော်ဒါ တလျောက်မှာ မြန်မာစစ်တပ်က ကချင် လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို တိုက်ခိုက်နေစဉ် ဘေဂျင်းကတော့ တရုတ်ဘော်ဒါမှာပဲ အခြေစိုက်တဲ့ "၀" တပ်မတော်ကို အဆင့်မြင့်လက်နက် ကိရိယာတွေ တိတ်တဆိတ်ရောင်းချနေတယ်လို့ လုံခြုံရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူတွေ က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ "၀"တပ်မတော် ကတော့ မြန်မာပြည်ထဲက လက်နက်ကိုင် တပ်တွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံးလည်းဖြစ်သလို အရှေ့တောင်အာရှ မှာတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုတွေနဲ့လည်း အကြီးကျယ်ဆုံး ပတ်သက်နေတဲ့ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ တရုတ်ကနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘေဂျင်းကတော့ မြန်မာပြည်က အခြားသော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ယူနိုက်တက် "၀" တပ်မတော်ကို တိတ်တဆိတ် လက်နက် တွေ ရောင်းနေတာပါလို့ လုံခြုံရေးလေ့လာသူတွေက ပြောကြားပါတယ်။
ဗြိတိသျှအခြေစိုက် IHS Jane's Intelligence Review လို့ခေါ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီး စိစစ်လေ့လာကာ အစီရင်ခံ တင်ပြလေ့ရှိတဲ့ Jane's Information Group ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလ အစီရင်ခံစာမှာတော့ တရုတ်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့အတွက် "၀" တပ်မတော်ကို အဆင့်မြင့် လက်နက်တွေ ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီထဲ မှာတော့ လေယဉ်ပစ် အမြောက်တွေ၊ တင့်ကားဖျက်လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ် အစင်းပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၂ စင်းထိ ပါရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုပါတယ်။ တင့်ကားဖျက် လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ မော်တော်ယဉ်ပုံစံမျိုးကို ပထမဆုံး အကြိမ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် လုံခြုံရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူနဲ့ IHS Jane's Intelligence Review ကို ရေးသားသူ အန်တိုနီ ဒေးဗစ္စကတော့ "ဘေဂျင်းက ၀တွေနဲ့ ဆက်ဆံလာတဲ့ သမိုင်းဝင်၊ ယုံယုံကြည်ကြည် ဆက်ဆံမှု အခြေအနေကို ချိန်ခွင်လျှာညီမျှဖို့ ကြိုးစားနေသလို၊ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ အဆက်အဆံကိုလည်း အဲဒီလို ညီမျှဖို့ ကြိုးစားနေတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
"တရုတ်က သူတို့နယ်နိမိတ်စည်းပေါ်က တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကို လစ်လျူရှုလို့ မဖြစ်နိုင်သလို၊ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာပြည်က ဗဟိုအစိုးရ ကိုလည်း လျစ်လျူရှုဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် တရုတ်က လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီလား ? မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး လက်နက်ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့နေတဲ့သူဟာ အစိုးရထဲက စီနီယာကြီးတွေ အထိ ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာ သိသာပေမယ့်၊ သူတို့ ဟာ ငွေရေးကြေးရေးမှာတော့ တိုက်ရိုက် ပါဝင်နေတယ်လို့တော့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒီနေရာမှာ သူတို့အနေနဲ့ (စွပ်စွဲလာရင်) ငြင်းနိုင်ဖို့ (ထွက်ပေါက်) အခွင့် အလမ်းလေးတွေလည်း ထားရမယ်လေ။" ဟု အန်တိုနီ ဒေးဗစ္စက ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကတော့ IHS Jane's Intelligence Review နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
"၀" လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အကြီးဆုံး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ "၀" တပ်မှာ တပ်သားပေါင်း ၃ သောင်းထိ ရှိနေသလို အချိန်ပိုင်း တပ်သားတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ တရုတ်ကတော့ သူရဲ့ ၀င်ရောက် မစွက်ဖက်ရေးပေါ်လစီကြီး ရှိနေပေမယ့် ၀တွေကို အကြီးမားဆုံး၊ တရားမ၀င် လက်နက်ထောက်ပံ့ပေး နေတယ်လို့ စစ်ရေးလေ့လာ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
ယေးလ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ပီအိပ်ခ်ျဒီ စာတမ်းပြုစုနေသူ ဂျော့ရှ် ဂေါ်ဒန်ကတော့ တရုတ်နဲ့ ၀တွေ အနီးကပ် အဆက်အဆံရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူက "၀တွေသည် တရုတ် စကားပြောသူတွေဖြစ်တယ်၊ ၀တွေက အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို တရုတ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
၀တွေရဲ့ ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂေါ်ဒွန်က – "တရုတ်ပိုက်ဆံသုံးတယ်၊ တရုတ် ဆဲလ်ဖုန်းတွေ၊ တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေကို အများဆုံး သုံးမယ်၊ မြို့ဧရိယာမှာ လျှပ်စစ်မီးတွေရနေမယ်၊ တရုတ်အင်တာနက်နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ထားတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၀တွေကို လက်နက်ရောင်းတဲ့ကိစ္စကလွဲလို့ တရုတ်က နယ်စပ်ဒေသကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ဒေးဗစ္စက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်က လတ်တလော ကချင်မှာလို ဒေသခံတွေနဲ့ စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေသလိုမျိုး မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ "၀" ဒေသမှာ လာမလုပ်ဖို့၊ ၀ဒေသကို စိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်ဖို့ သတိပေး လိုက်တာမျိုးပဲဟု ဒေးဗစ္စက ဆိုပါတယ်။
"မြန်မာမြောက်ပိုင်းမှာတော့ တရုတ်က မီးစထိုးပေးတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ "၀" တွေကို အင်အားဖြည့်တင်းပေးတာက (တရုတ်အနေနဲ့) စစ်ရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ကို အင်အားဖြည့်တင်းလိုက်တာပါပဲ။ ခင်ဗျားက အဲဒါကို ကြိုက်မယ်ဆိုရင်၊ (ဒီလိုမျိုးလည်း တွေးနိုင်ပါတယ်။) အဲဒီဒေသမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်နေတာကို ဆက်လက်ပြီးတည်တံ့ဖို့ တရုတ်က လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သလို အဲဒီလို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြစ်နေတာ ကလည်း တရုတ်အတွက် အကောင်းဘက်ဆောင်ပါတယ်။" ဟု ဒေးဗစ္စက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာသမ္မတရုံးက ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးရဲထွတ် ကတော့ IHS Jane's Intelligence Review နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးဖို့ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
သူက "ကျနော်တို့မှာ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသတင်းမှမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် အချိန်တိုင်းဆိုသလို တရုတ်အစိုးရက ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်မစွက် ဖက်ဘူးဆိုတာ ကတိပြုပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့က သူတို့ရဲ့ ကတိက၀တ်ကို လက်ခံပါတယ်။" ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသော ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ ကိုယ်စား မုဒိတာ မေတ္တာစကားများ ပြောကြားရာတွင် ရွှေတိမ်ဓမ္မသိင်္ဂီကျာင်းတိုက်မှ ဆရာတော်ဦးစန္ဒိမာမှ "ချီးမြှောက် ထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော်များကို သူတို့ရဲ့ချွေးနည်းစာထဲက တတ်နိုင်သမျှ လှူဒါန်းတဲ့အတွက် သံဃာတော်များကိုယ်စား ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်း ပဏမပြောလိုပါတယ်။တိုင်းပြည်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပြောင်းလဲမူတွေရရှိဖို့အတွက် အခုလို ကွန်ရက်တွေ အသီးသီး၊အဖွဲ့အစည်းတွေ အသီးသီး၊တနိုင်တပိုင် တတ်စွမ်းသမျှ အားလုံးပူးပေါင်းပြီး ခုလိုဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ တွေဟာ ဘက်တစ်ဘက်ရဲ့ လှုံဆော်မူတွေကြောင့် ဖြစ်နေတာလား ဆိုတာ စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ခုထိ တည်ဆောက်လို့ မရသေးဘူး။ ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဒီနေ့ထိ ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အမှန်ဆို ဒီဟာတွေဟာ တကယ့်လက်တွေ့မှာ မဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။ဒါတွေ မဖြစ်ဖို့အတွက် အားလုံး ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို သတိထားရှောင်ရှားကြဖို့ ဦးဇင်းအနေနဲ့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်" ဟုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဆက်လက်၍ ရွှေတောင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်၊ ဓမ္မပီယကျောင်းတိုက်ဆရာတော်၊ ကချင်ကက်သလစ် အသင်းတော် ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီး၊ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမား ဦးသာဘန်း၊ ရွှေမင်းသား ဖောင်ဒေရှင်းဥက္ကဌ တို့မှ မုဒိတာ စကားအသီးသီး မြွတ်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Read more here in M-Media
Posted: 25 Feb 2013 10:31 PM PST
Justeru, kita amat merasa selesa bila Perdana Menteri, YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak mengambil ilham daripada perpaduan di Sabah dan mempelopori gagasan 1Malaysia.
Sebaik sahaja mengambil-alih jawatan Perdana Menteri pada April 2009, Dato' Sri Najib telah mencetuskan pelbagai inisiatif untuk menambahbaik paradigma dan tadbir urus negara. Beliau mencetuskan gagasan "1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" dengan mengajak semua rakyat pelbagai kaum bersatu padu, saling menerima dan menghormati satu sama lain serta membina bersama negara ini.
Saya sudah berkhidmat di bawah tiga Perdana Menteri sejak tahun 1994, iaitu Tun Dr. Mahathir, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan kini Dato' Sri Najib. Sungguhpun ketiga-tiga Perdana Menteri mempunyai kredibiliti dan pendekatan masing-masing, tetapi saya amat teruja dan kagum dengan program transformasi yang diperkenal dan sedang dilaksanakan di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang ada sekarang ini.
Dato' Sri Najib juga memperlihatkan kepimpinan ulungnya dengan memansuhkan beberapa akta yang menjadi duri dalam daging sistem demokrasi negara selama ini. Antaranya ialah Akta Keselamatan dalam Negeri (ISA), dan Akta Buang Negeri 1959. Akta Kediaman Terhad 1933 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 pula dipinda.
Sejurus selepas Dato' Sri Najib menjadi Perdana Menteri, saya telah meminta pertemuan khusus dengan beliau bersama-sama dengan Menteri-Menteri dari Sabah dan Sarawak yang lain. Saya mengatakan kepada beliau mengenai keperluan khusus pembangunan Bumiputera Sabah dan Sarawak, bahawa Kerajaan Persekutuan tidak lagi boleh terlimpas pandang keperluan khusus dan pelaksanaan program khusus untuk masyarakat kita.
Sidang hadirin sekalian, pada saat ini, saya menghimbau semua ahli parti untuk menghargai YAB Dato' Sri Najib, Perdana Menteri Malaysia kerana kesanggupannya untuk menangani isu yang sulit ini, taking the bull by its horns, membenarkan penubuhan RCI. Dia telah mendengar rayuan kita mengenai hal ini dan dia sudah pun menjawabnya.
Dalam konteks ini, Upko juga bersyukur kerana usaha kita dan rakan-rakan seperjuangan yang lain dalam BN berhasil apabila Dato' Sri Najib bersetuju dengan gesaan kita agar 16 September setiap tahun diiktiraf sebagai Hari Malaysia, manakala 31 Ogos adalah Hari Kemerdekaan. Penghargaan sedemikian, bermula tahun 2010 amat bermakna bagi Upko kerana ia adalah titik mula perjalanan sebuah negara yang kini semakin menghampiri Wawasan 2020 yang terbilang.
56.Isu-isu ini merupakan keprihatinan utama masyarakat kita dan perjuangan Upko sejak semula. Kita akan memastikan pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan dan perkhidmatan awam diberi lebih keutamaan.
57.Kita mahu memberi jaminan kepada rakyat Malaysia bahawa terdapat keperluan khusus, lebih daripada keperluan bersama, yang kita akan perjuangkan di dalam parti ini. Fokus berterusan kita ini bukan sekadar pelengkap kepada Manifesto Barisan Nasional kelak, tetapi sebagai jaminan perjuangan perlindungan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan komitmen peranan bersama semua kaum dalam proses pembangunan negara bangsa.
59.Sebelum saya mengundur diri, saya menghargai ahli-ahli parti yang prihatin terhadap insiden di Kg. Tandou, Lahad Datu. Saya tidak berniat untuk membuat ulasan panjang mengenai pekara ini kerana saya tahu pihak berkuasa sedang berhadapan dengan situasi yang cukup runcing. Walaupun kita bersetuju bahawa setiap tindakan itu mesti mengambil kira semua aspek, kita juga tidak boleh lupa bahawa undang-undang negara kita mesti dikuatkuasakan dan keluhuran negara dipertahankan. Untuk saat ini, saya fikir itu sahajalah yang saya ingin katakan dan saya berharap kita semua berhati-hati dan tidak termakan oleh pelbagai khabar angin mengenai perkara ini.
60.Perjalanan kita untuk 50 tahun akan datang bakal bermula tidak lama lagi bila Dato' Sri Najib membubarkan Parlimen sekaligus memungkinkan Pilihanraya Umum Ke-13 diadakan.
Dalam Konvensyen Nasional Upko 2009, kita memberikan komitmen kepada Dato' Sri Najib yang hadir pada ketika itu, bahawa kita Upko, we are with you in the arena.
63.Baik buruknya hari esok rumpun Pasokmomogun terletak dalam tangan kita. Upko sudah terbukti berjaya dalam perjuangan selama ini. Upko ada fokus, mahu menggapai matlamat masyarakat kita. Keberanian kita sudah terserlah, dan hari-hari mendatang bakal melihat sunduan kita sudah pulih dan mampu mencecah langit. Lima puluh tahun akan datang, kita akan tersenyum di mana pun jua kita berada kerana rumpun Pasokmomogun akan melihat semua ini menjadi kenyataan kerana keikhlasan yang bersalutkan doa dan air mata keinsafan.
Posted: 25 Feb 2013 10:11 PM PST
Posted: 25 Feb 2013 09:34 PM PST
"ဟုတ်တယ်-မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက-ကျွန်တော်တို့ကို-ပရက်ရှာတွေ- တော်တော်ပေးတယ်-မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့-ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်-ဆူးလေ ဘုရားနားကိုလာကြည့်ပါ-ဘုရားရယ်-ဗလီရယ်-ချခ်ျရယ်-ဘာသာစုံ-တစ်နေရာထဲမှာ-အေးအေးချမ်းချမ်းနေနှိုင်တာ-ဘယ် နိုင်ငံမှာရှိလဲ-ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ဒါမျိုးရှိတယ်-ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်ဘုရားလာတည်မယ်-ရမလား-လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်" တဲ့ဗျား။
ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းအဖြေပေးခဲ့တာက "ဟုတ်တယ်-မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက-ကျွန်တော်တို့ကို-ပရက်ရှာတွေ- တော်တော်ပေးတယ်-မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့-ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်-ဆူးလေ ဘုရားနားကိုလာကြည့်ပါ-ဘုရားရယ်-ဗလီရယ်-ချခ်ျရယ်-ဘာသာစုံ-တစ်နေရာထဲမှာ-အေးအေးချမ်းချမ်းနေနှိုင်တာ-ဘယ် နိုင်ငံမှာရှိလဲ-ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ဒါမျိုးရှိတယ်-ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်ဘုရားလာတည်မယ်-ရမလား-လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်" တဲ့ဗျား။
" ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းခင်ဗျား-ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအဓိပ္မါယ်ကို-ဝန်ကြီးသဘောမပေါက်ဘူးထင်ပါတယ်- ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါရစေ—-ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ-အစ္စလာမ်ဘာသာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရော-ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာပါပြန့်နှံ့နေပြီး တရားပွဲတွေမှာ ဟောပြောနေတာတွလဲ တွေ့နေရပါတယ် "-ဆိုတော့
ဝန်ကြီးက "မရှိပါဘူး " တဲ့ဗျာ-
ကျွန်တော်က"ဟာ-ဝန်ကြီးရယ်-ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ-လူသိရှင်ကြားပါ-ဂျာနယ်တွေထဲမှာပါပါတယ်-ကရင်ပြည်နယ်မှာ- မွန်ပြည်နယ်မှာ-တာချီလိတ်မှာ-ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နေရာအနှံ့ ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတာပါ-ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်မှာ- တရားပွဲတွေလုပ်ပြီးဟောပြောနေသလို-မန္တလေးမှာလဲ မြို့အနှံ့ မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးစာရွက်စာတမ်းတွ ဝေနေပါတယ်" ဆိုတော့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက လက်ခံလိုပုံမရပေမဲ့ ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းက "ဟုတ်ပါတယ်-ဖြစ်နေပါတယ် "-လို့ လှမ်းပြော လိုက်တော့မှ မငြင်းတော့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်က ဆက်ပြီးတော့- " ဒီကိစ္စတွေကို-သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကနေ တားဆီးပေးစေချင်ပါတယ်- ဒီစာရွက်တွေဝေတာ-တရားတွေဟောတာဟာ- ကျွန်တော်တို့အတွင်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး- ကျွန်တော်တို့ အရေထူနေပါ ပြီ -ကျွန်တော်တို့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေ-လူထုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်- ဒါပေမဲ့-ဒီဟောပြော ချက်တွေ- ကြော်ငြာချက်တွေဟာ-မြန်မာပြည်ထဲတင်ပြန့်တာမဟုတ်ပါဘူး-နိုင်င့တကာမီဒီယာတွေကတဆင့်-အင်္ဂလိပ်ဘာ သာပြန်ပြီး-တကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နေပါတယ်-ဒီလို တကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်တော့-မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဖိအား ပေး-ဒီလိုဖိအားပေးတော့-မင်းတို့မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေက တို့နိုင်ငံကိုဖိအားပေးတယ်ဆိုပြီး-ကျွန်တ်ာတို့ မွတ်စလင်မ်တွေ ကိုပဲအပြစ်မြင်-ဖြစ်ရလို့ပါ-မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတကာ ပုံရိပ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စမို့ပါ" —လို့ရှင်းပြတောင်းဆိုခဲ့ရ ပါတယ်။
ကိုမြအေးတို့ အဖွဲ့ဟာ အစိုရအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများကို လက်လှမ်းမှီပါတယ်- အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို Educate လုပ် ပေးကြပါ- တာဝန်ရှိတာတွေ ပြောပြပေးကြပါ။
Posted: 25 Feb 2013 09:21 PM PST
Source: Maungmaung Skw
၂၁/၂/၂၀၁၃ ရက်နေ့က ကိုမြအေး အပါအဝင် ၈၈ ခေါင်းဆောင် လေးဦးနဲ့ မန္တလေးက Edu Zone မှာတွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာအကြောင်းတွေ ပြောကြမယ် ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။
ညနေခင်း ဘုရားဝတ်ပြုချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ အခန်းအနားကို ၁၅မိနစ်လောက် နောက်ကျပြီးမှရောက်သွားတော့ အခန်းအနားစတင်ပြီး ကိုမြအေးစကားပြောနေလို့ အခန်းအနားဟာ ဘာခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကိုမြအေးပြောနေတဲ့စကားအရတော့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်များက လူနဲစု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားနေမှုများကို ဖြေဖျောက်-ပပျောက်စေဖို့- အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို လာရောက်ဆွေးနွေးတာလို့ ကျွန်တော်သဘောပေါက်မိပါတယ်။
ကိုမြအေးနဲ့အတူ အခြား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၈၈ ခေါင်းဆောင်သုံးယောက်ကလည်း သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကို ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အခန်းအနားကိုတက်ရောက်လာသူများမှလည်း ရှုဒေါင့်ပေါင်းစုံမှ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ပြောခဲ့ ဆိုခဲ့ကြတဲ့ အသံဖိုင်တွေရှိပေမဲ့ အသေးစိတ်ကိုရေးပြမနေတော့ပါဘူး။
အဲ့ဒီအခန်းအနားမှာ ကျွန်တော်ပတ်သက်ခဲ့တာလေးတွေကိုပဲ တင်ပြလိုပါတယ်။
အထက်မှာ ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲ လူနဲစုတွေက လူများစု အမြင်ကြည်လင် စိတ်တိုင်းကျအောင် ဘယ်လိုနေသင့်ထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြတဲ့ပွဲပါ။
ကိုမြအေးကပြောတယ်-ဗလီတွေထဲမှာ မြေအောက်ခန်းတွေနဲ့ စစ်စခန်းတွေရှိတယ် ဆိုတဲ့ စွတ်စွဲပြောဆိုခံနေရ တာတွေကို ကျွန်တော်တုိ့ဘက်က ရှင်းလင်းရမယ်တဲ့။
မလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာ-အခုစွတ်စွဲပြောဆိုသလို ဗလီထဲမှာ မြေအောက်ခန်းတွေနဲ့ စစ်စခန်းတွေလို တည်ဆောက် မထားဘူးဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတော်တော်များများသိကြပါတယ်။ ဗလီတွေကိုဆောက်လုပ်တဲ့အချိန် ပြင်ဆင်တဲ့ အချိန် ကြွေပြားကပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လက်သမား ပန်းရံ တွေနဲ့ပဲ လုပ်ကြကိုင်ကြ ပြင်ကြဆင်ကြတာပါ။
သူတို့တတွေ ဗလီထဲမှာ နေရာအနှံ့ သွားလာမြင်တွေ့နေတာပဲ-ဘာရှိတယ်ဘာမရှိဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိနှိုင်တဲ့ကိစ္စတခု ပါ- သာသနာရေးဦးစီးဌာနကလူတွေ-စည်ပင်သာယာကလူတွေ-ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးကလူတွေ-ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံး ဗလီထဲမှာဘာရှိတယ် ဘာမရှိဘူးသိကြပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဗလီတွေမှာ မြေအောက်ခန်းတွေ စစ်စခန်းလိုပုံစံမျိုးဆောက်ထားတယ်တို့-စစ်သင်တန်းပေးတယ်တို့ ပြောနေတာတွေဟာ မဟုတ်တမ်းတရား စွတ်စွဲပြောဆိုမှုသက်သက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်မမှန် စွတ်စွဲပြောဆိုနေတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စကားမျိုးကို အရေးအရာထားပြီးဖြေရှင်းနေဖို့ လိုအပ် ပါသလား။မလိုအပ်ပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ- အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှာက်ပါမယ်လို့ သစ္စာဆိုထား သူများ ရှင်းကြပါစေ။လိုအပ်ရင် စွတ်စွဲပြောဆိုသူတွေကိုပါခေါ်ယူပြီး ကြိုက်တဲ့ဗလီထဲကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်တာပဲ။
ကျွန်တော်တို့က ဘယ်သူ့ကိုခေါ်ရှင်းပြနေစရာလိုမလဲ- ကျွန်တော်တို့က ခေါ်ယူရှင်းပြတော့လဲ တရားဝင်မှာလား။
နောက်တခု ကိုမြအေးအဓိက ဇောင်းပေးပြောဆိုသွားတာက မွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးများ ခေါင်းမီးခြုံခြင်း နဲ့ အမျိုးသားများ အကျီရှည်ဝတ်ခြင်း မုတ်ဆိပ်ထားခြင်းတွေဟာ မြန်မာ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတွေနဲ့ကွဲပြားနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ လူများစုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ စိတ်တိုင်းမကျစရာ- အထင်အမြင်လွဲမှားစရာတွေ ဖြစ်နေလို့ မြန်မာပြည် မှာနေရင် မြန်မာလိုပဲ ဝတ်စားသင့်တယ်-လို့တင်ပြသွားပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အဲ့ဒီအခ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ အစ္စလာမ် သာသနာ့ပညာရှင်လူငယ် မွဖ်သီအွမ်မာရ် ရဲ့ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားတဲ့ အလွန်သဘာဝကျတဲ့ ဆွေနွေးချက်ကလေးတင်ပြလိုပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ သီးခြားဝတ်စုံဆိုတာ မရှိပါဘူး-သီးခြားဝတ်စားရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာ လဲ မရှိပါဘူး-သို့သော်လဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့သာသနာရဲ့ ဦးစီးရှေ့ဆောင် မဟာတမန်တော်မြတ်ကို ချစ်ခင်မှု လေးစားမှု ကြည်ညိုမှုတွေကြောင့် မဟာတမန်တော်ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို အတုခိုး ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ တရားတော်ကသတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်အရ မုတ်ဆိပ်ထားကြပါတယ်။ဒီအကျီရှည်ဟာ အိန္ဒိယအမျိုးသားတွေဝတ်တဲ့ပုံစံနဲ့သာ တစ်ထပ်ထဲတူနေ တာ မဟုတ်ပါဘူး-ရှေးဟောင်းတရုတ်လူမျိုးများဝတ်ဆင်လေ့ရှိကြတဲ့ အကျီနဲ့လဲတူပါတယ်- ဒီအကျီဟာ မဝတ်မနေရ ပြဌာန်းချက်မဟုတ်ဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးအပ်ထားတဲ့ လွတ်လပ်မှုအရ ကျွန်တော်တို့ ဝတ်ဆင်ကြတာ မှန်ပေမဲ့- ကျွန်တော်တခုမေးလိုပါတယ်-လူများစုနဲ့ပြေပြေလည်လည်ရှိဖို့အတွက်-ပြသနာရှာနေတာတွေ-စွတ်စွဲပြောဆိုနေတာတွေ-ရန်ရှာနေတာတွေပြီးသွားမယ်ဆိုရင် ဒီအကျီတွေ ကျွန်တော်တို့ စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်ပါ့မယ်- အစိုးရက အကျီရှည် မဝတ်ရလို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပါ-နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့ အမိန့်ကိုနာခံဖို့က ကျွန်တော်တို့ သာသနာကသွန်သင်ထား ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်" -လို့သဘောရတဲ့ စကားတွေပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ အထက်ကပြောသွားတဲ့ သာသနာ့ပညာရှင် ညီငယ်ရဲ့စကားကို အကြွင်းမဲ့ထောက်ခံ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကို ဖိနှိပ်ထားခဲ့တယ်။ဒီအထဲမှာ လူနဲစု အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ အထူးနှိပ်ကွပ်ခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်။
လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာ စစ်အစိုးရကို မခံခြင်တဲ့စိတ်-မကျေနပ်တဲ့စိတ်-တော်လှန်လိုတဲ့စိတ်-ပုန်ကန်လိုတဲ့စိတ်တွေ ရှိကြတယ်။၈၈ အရေးအခင်းကြီးက သက်သေပဲ-နိုင်ငံနဲ့တဝှမ်း လူမျိုးစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ ဟာ စစ်အစိုးရကို ရတတ်သမျှ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ တော်လှန်ရေး ဆန့်ကျင်ရေး ပုန်ကန်ရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အပြင်းအထန် နှိပ်ကွပ်ခြင်းကိုတပြည်လုံး ခံခဲ့ကြရတယ်-
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တော်လှန်ရေးမလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ-မလုပ်ရဲတဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ စစ်အစိုးရ အပေါ်ဆန့်ကျင်မှုကို မိမိတို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းတွေနဲ့ပြကြတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဘုရားတရားဘက်ပိုလိုက်စားလာကြသလို အချို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီး သင်္ဃန်းစီးသွားကြတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဘာသာရေးဘက်ကို ပိုချဉ်းကပ်သွားကြတယ်- အကျီရှည်တွေဝတ်လာကြတယ်-ဘာသာရေး အရ မုတ်ဆိပ်တွေထားလာကြတယ်။အဓိက မြစ်ဖျားခံလာတာကတော့ စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ကဖြစ်လာတာတွေပဲ- ဒီဘက်ခေတ်မှာရောက်တော့ အမြင်တွေစောင်းပြီး အပြစ်တင်စရာတွေဖြစ်သွားတာကတော့ ဝမ်းနည်းစရာပါ။
နောက်တခုရှိတာက စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ တိုက်ပုံအကျီဝတ်တဲ့ မြန်မာလိုနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ ဘာလှုတ်ရှားမှုမှ ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။အံ့သြစရာကောင်းတာက အကျီရှည်ဝတ်ပြီး မုတ်ဆိပ်ထားပြီး လှုတ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကိုတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးပေးခဲ့တာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေခဲ့ရတယ်။
တိတိကျကျပြောရရင် တဗလိဂ် လို့ခေါ်တဲ့ အပတ်စဉ်-လစဉ်-နှစ်စဉ် ခရီးထွက်ပြီး သာသနာရေးကျင့်ကြံတဲ့ အဖွဲ့ ကို အထူးအခွင့်အရေးတွပေးခဲ့တယ်။
ကြိုက်တာလုပ်ကြ-တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ အခန်းအနားတွေလုပ်ကြ-လူတစ်သိန်း နှစ်သိန်း စုချင်တယ်-စုကြ။ခရီးတွေသွားနိုင်ဖို့ ရထားလက်မှတ်တွေကို ပါမစ်တွေနဲ့ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ရောင်းပေးတယ်-ကျန် တဲ့ ပုံမှန် နေ့စဉ်ခရီးသွားတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်-ရောက်ကြ။
ပြီးတော့မှ တွေ့လား ဒီကုလားတွေကြောင့်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်ရတာ-ကုလားတွေဘယ်လိုအခွင့်အရေး ယူသလဲ ကြည့်-မြန်မာပြည်ကို ဒီလိုကုလားတွေ အများကြီးရောက်လာပြီး-ကုလားပြည်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်-ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒကို မှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေ-အတွေးတွေဝင်သွားအောင် နှိုးဆွပေးခဲ့တယ်။
ဒါကို အဲ့ဒီအဖွဲ့ကလူတွေကလဲ နားမလည်ကြဘူး မသိတတ်ကြဘူး မမြင်ကြဘူး-တွေ့တယ်မဟုတ်လား ငါတို့လုပ်ရပ်-ငါတို့လမ်းစဉ်မှန်ကန်လို့ စစ်အစိုးရကတောင် ခွင့်ပြုရတယ် ဆိုပြီးစိတ်ကြီးဝင်ကုန်ကြတယ်။
စစ်အစိုးရက မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်း အိုးမဲသုပ် သွေးခွဲနေတာကို မမြင်ကြဘူး။
အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေကိုမဆိုထားနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချင်းချင်းနဲ့တောင် အနေအထိုင် အပြောအဆို ဝတ်ပုံစားပုံတွေ ကွာဟကုန်တယ်။
သူတို့အဖွဲ့ကလွဲပြီးတော့ ကျန်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ လှုတ်ရှားမှုလုပ်ခွင့်မပေးတော့-လူ့သဘောသဘာဝအရ လှုတ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းထဲကို လူတွေစုပြုံရောက်လာကြရော-
လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်း-ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့သူရှိသလို ဆိုးတဲ့သူလဲရှိတယ်-စည်းကမ်း ရှိတဲ့သူရှိသလို စည်းကမ်းမဲ့တဲ့သူလဲရှိတယ်-ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့သူတွေရှိသလို အပြောအဆို အနေအထိုင်ကအစ မိုက်ရိုင်းတဲ့သူတွေလဲ ရှိတာပဲ။
ဒီလိုဘဲ လှုတ်ရှားခွင်းရတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ လူစုံတက်စုံပါလာတော့တယ်။
အချို့အချို့သောသူတွေရဲ့ တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုအားနဲတာ-ဆင်ခြင်တုန်တရားမရှိတာတွေကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုခြင်း ထိပ်တိုက်တွေ့တာ-ဘာသာအချင်းချင်း သဟဇာတ မဖြစ်တာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရတယ်။
ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ ဒီပြသနာဟာ ခေတ်-စနစ်ရဲ့ပြသနာပါ-
ဒီကနေ့ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာတာသာ တကယ်မှန်ကြည့်ပါ -ကျွန်တော်တို့ လူတွေအားလုံး ပုံမှန်ဖြစ်သွားမှာပါ။
ရွေးချယ် လှုတ်ရှားစရာ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ပေါများလာပါလိမ့်မယ်-တစ်နေရာထဲ စုပြုံနေတာ လျော့သွားပါ လိမ့်မယ်။
မိမိတို့ အပြုအမူ အလေ့အကျင့်တခုကြောင့် မိမိတို့နဲ့အတူ တစ်မြေထဲနေ-တစ်ရေထဲသောက်-အေးအတူ ပူအမျှ နေကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုထင်မြင်ရတယ်-ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာတွေကို သိလာကြရင်-နားလည်လာကြရင်-အချင်းချင်းထိမ်းကျောင်းပြီး အားလုံးအဆင်ပြေသွားကြမှာပါ။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဒီအခြေအနေတွေကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးများ မှ ပုဂ္ဂိုလ်များက တဗလိဂ် အဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေကို ရှင်းလင်းဖျောင်းဖျသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီပြသနာဆိုတဲ့ဟာကိုဖြေရှင်းဖို့ ဒီလောက်ပဲ လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဗလီတွေကနေ-ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာအမျိုးသမီးများကို လက်ထပ်ယူကြဖို့ဆော်သြတယ်-ဆရာဝန်သမီးယူရင် ဘယ်လောက်- စစ်ဗိုလ်သမီးယူရင်ဘယ်လောက် ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာတွေဟာ လုံးဝမဟုတ်မမှန်ပါဘူး-မဟုတ်မမှန် ကြောင်း အများကို ရှင်းလင်းပြရမယ် လို့ပြောပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်မမှန် စိတ်ကူးပေါ်ရာ ရမ်းသမ်း စွတ်စွဲတိုင်း-အခြေအမြစ်မရှိအပြစ်တင်တိုင်း လိုက်ရှင်းနေရရင်-ဒီလို ရှင်းရတဲ့အလုပ် တစ်သက်လုံးလုပ်လို့ပြီးမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ။
ဒီစကားဟာ တရားမဝင်ဖြန့်ချီနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဆန့်ကျင်ရေးစာအုပ် "အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ပါ သည်" ထဲက စကားလုံးတွေပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတော်တွေက ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရော-ပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ်မှာပါ အကြိမ်ကြိမ်ရှင်းပြီးသား- ခြေခြေမြစ်မြစ်ရှင်းပြီးသားတွေပါ-ဘာမှနောက်ထပ်ပြောနေရမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့ဒီနောက်တော့ ကိုမြအေးက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီး-နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြဘို့-နိုင်ငံတော် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ အထောက်အကူဖြစ် အောင် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်သွားဘို့ မှာကြားပါတယ်။
ပြသနာကို မီးထွန်းရှာနေတဲ့သူတွေဟာ လူနဲစုကလေးသာဖြစ်ပါတယ်-ရဟန်းသံဃာ တွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအများ စု ဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားပါတယ်။
သိတာပေါ့ဗျာ-ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေလိုကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေ-လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုရှိလို့သာ ဒီတိုင်းပြည်ကြီး ဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သိပ်သိတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာ အစ္စလာမ်ကို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ပြသနာရှာနေတဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါးထဲရှိလို့သာပေါ့ – များများမဟုတ်ဘူး-အဲ့ဒီဆရာတော်လိုမျိုး သုံးပါးလောက်ရှိကြည့်လိုက် -မန္တလေးမြို့ ပျက်သွားတာကြာလှပြီ။
ကျွန်တော်တို့က သဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့ ထေကြီးဝါကြီး သံဃာတော်ကြီးများထံ ချဉ်းကပ်သြဝါဒခံပြီး ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးကိုဆောင်ရွက်နေသလို အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ်မှာ သဘောထားတင်းမာပါတယ် ဆိုတဲ့ ဆရာတော်ဦးဝီရသူ တို့လို ဆရာတော်ကြီးများနဲ့လဲ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး- ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ လုပ်နေ ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခန်းအနားတွေဟာ-ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေဟာ-ဒေသခံ တာဝန်ရှိသူ တွေရဲ့ တားဆီးခြင်းကိုခံရပါတယ်-တခါတရံ တားဆီးတာထက်ဆိုးတာက ပွဲမိန့်ပေးပြီး အချိန်နီးမှ ပါမစ်ပြန်ရုတ်သိမ်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ ပြသနာကို ထပ်ဆင့်ပွားများလာအောင်လုပ်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စောစောက ဆွေးနွေးတင်ပြသွားတဲ့ သာသနာ့ပညာရှင် မွဖ်သီ အုမ်မာရ် ရဲ့စကားလေးကို ပြန်ကိုးကား ချင်ပါတယ်။
"ဆရာကြီးဦးရာဇတ်-ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ ပြောင်မြောက်စွာ ပေါ်ထွက်လာတာဟာ-ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လို ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိလို့-" ဆိုတဲ့စကားပါ။
လူတစ်ယောက်-ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ အစွမ်းအစကို ပြနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့်-လုပ်နိုင်ခွင့် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆရာကြီးဦးရာဇတ်ဟာ သူတိုင်းပြည်အပေါ်မှာစေတနာရှိသလောက်-သူ့ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက်-တိုင်းပြည်ကိုချစ်နိုင်ခွင့်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လို ခေါင်းဆောင်က ပေးခဲ့လို့သာ-ဒီအခွင့်အရေးရခဲ့တာပေါ့။
စစ်အစိုးရခေတ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလိုမျိုးဆိုရင် ဆရာကြီးဦးရာဇတ်ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ ကိုမြအေးတို့အဖွဲ့ကို ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံလေးတင်ပြဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့မြို့ ကျွန်တော်တို့ အတိုင်းအတာနဲ့- ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေး လုပ်ငန်းရပ်တွေကို ယခင်ကလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်-လက်ရှိလည်းကျိုးစားနေကြသလို- သဟဇာတ အဖွဲ့ကြီးကို လူမျိုးစုံဘာသာစုံပါဝင်ပြီးဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာတော်ကြီးများသြဝါဒခံယူလျက် ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်-နောက်နောင် လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်-လို့ တင်ပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။